Bonke abantwana kufuneka bakhatshwe ngumntu omdala (akukho kwehla) kwaye bonke abantu abadala kufuneka bakhatshwe ngumntwana. Abantwana kunye nabantu abadala kufuneka bahlale kunye ngalo lonke ixesha lotyelelo lwabo. Abantu abadala abanqwenela ukukhenketha kwiMyuziyam banokukwenza oko ngokukhapha iMyuziyam.
UMgaqo-nkqubo wokuTyaya kunye neZixhobo
IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington yikhampasi engenamsi kwaye ayinazixhobo. Akukho kutshaya, ukuphefumla okanye izixhobo ezivumelekileyo kwizakhiwo zethu nangaliphi na ixesha.
Ukufota kwabatyeleli kuvunyelwe ukuba kusetyenziswe umntu, hayi urhwebo kuphela. Iifoto azinakupapashwa, zithengiswe, zenziwe kwakhona, zisasazwe, okanye zisetyenziswe ngorhwebo nangayiphi na indlela ngaphandle kokuba zamkelwe nguMlawuli oPhetheyo ngokubhaliweyo.
Ukufota akufunekanga kuphazamise abanye abatyeleli okanye abasebenzi beMyuziyam kwaye akufuneki kuthintele ukufikelela kwimiboniso, ekungeneni/ekuphumayo, kwiminyango, kunye neendawo eziphezulu zezithuthi.
Ukufotwa kwabanye abatyeleli kwiMyuziyam ngaphandle kwemvume ecacileyo akuvumelekanga ngokungqongqo.
Ukufota kobuchwephesha kunye nevidiyo kufuna ukuba amalungiselelo enziwe kwangaphambili kunye noMlawuli oyiNtloko.
IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington inelungelo lokuthatha iifoto zeendwendwe ukuze zisetyenziswe kwixesha elizayo. Ngokuthenga itikiti lokungena, ugunyazisa iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington ukuba ithathe iifoto kunye neevidiyo zazo zonke iindwendwe ezibhalisiweyo kunye nabakhathaleli ukuba bazisebenzise, babonise kwaye benze iifoto ezinjalo kunye neevidiyo kwiwebhusayithi, iintengiso, kunye nezinye imidiya ngeenjongo zokwazisa.
Ukuba awuwakhuphi amalungelo emifanekiso kwiMyuziyam yaBantwana yaseWilmington, nceda usazise ngokubhala apha marketing@playwilmington.org.